Gbasara Anyị - Boselan Tank Company Limited
(titanium alloy) plate plate ano abuo nke enamel nzuko. Ngwaọrụ a etinyere n’ime mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, nsị nsị mmiri, nsị anụ ụlọ na nsị obodo, ọgwụgwọ sludge, leachate na ahịhịa ndị ọzọ, wee kwado ọrụ ahụ iji mezuo USB, IC, UASB, CSTR na usoro ịgba agba ndị ọzọ na mgbaze, mmecha zuru oke nke okirikiri mba na ịbanye na ahịa mba ụwa.
Usoro Nkà na ụzụ
1. GFS tank: plate steel a zụrụ azụ na-akụ, gbagọrọ agbagọ, agbagbuo, fesaa ma mehie.
2. Mpempe ọkụ membrane okpukpu abụọ: a na-egbutu akwa a na-eji PVC kpuchie ọnụ ahịa achọrọ maka nrụpụta site na ịkpụzi ntuziaka, wee jikọta akwa abụọ nke akwa pvc na-ejikọ ọnụ site na igwe na-ejikọ ọnụ.
1. Mwepụta ngalaba nke ụkpụrụ ụlọ ọrụ, na-enye ogo nke atọ na ụlọ ọrụ ahụ;
2. Ulo oru di elu na mpaghara hebei;
4. Nyocha akụkọ nke ọkọlọtọ maka nyocha nchekwa ọcha nke akụrụngwa ụlọ na mmiri ọ drinkingụ andụ na ihe nchebe maka enamel ndị a kpọkọtara;
5. Asambodo nkwanye ugwu AAA;
Asambodo 6.AAA maka ịkwanyere nkwekọrịta na idebe nkwa ike;
7. Usoro nrụpụta nchekwa nchekwa-3 ụlọ ọrụ (igwe);
8. Nchọpụta ihe egwu na nyocha nke nsogbu na njikwa nsogbu zoro ezo.